December | 2010 | Kanyan's Blog
Happiness Comes from Shitting
Posted in Prose on December 23, 2010| 1 Comment »
ဗိုက်ထဲက နာသလိုဖြစ်ပီး အိပ်ယာက နိုးလာတယ်။ မိနစ်နဲနဲလောက်ကြာတော့ ထပီး အိမ်သာတက်လိုက်တယ်။ အိမ်သာတက်ရင်း မြင့်သန်းဘာသာပြန်တဲ့ ရေမွန်ကာဗာရဲ့ ၀တ္ထုတိုတွေထဲက “အိမ်နီးချင်း”ဆိုတဲ့ အပုဒ်ကို ဖတ်နေမိတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ “ပျော်ကြပေတော့”ဆိုတဲ့ စကားစုလေးကို သွားတွေ့မိတယ်။ ပျော်ကြပေတော့ ဆိုတာ ဘယ်လိုများပါလိမ့်။ မူရင်းမှာ be happy များ ဖြစ်လေမလား တွေးမိတယ်။ မူရင်းက be happy ဆိုရင်တော့ ပျော်ကြပေတော့ လုပ်လို့ မလျော်လှဘူး။ ပျော်ကြပေတော့က သရော်သံ ပါနေလို့ပဲ။ ဘာသာပြန်သမားက အဲဒီလို လေရှိသူမို့ ချော်ပြန်မိတယ်ဆိုလည်း အံ့သြစရာတော့ မရှိဘူး။
၀တ္ထဲုက ပထမလင်မယားနှစ်ယောက်က ဒုတိယ လင်မယားနှစ်ယောက်ကို အားကျနေတဲ့ပုံ၊ နည်းနည်းလည်း မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေပုံပဲ။ ဒုတိယလင်မယားက ပိုပြီးသုံးနိုင်စွဲနိုင်ကြတယ်။ သူတို့ခရီးသွားရင် ပထမလင်မယားက သူတို့အိမ်ခန်းကို ကြည့်ပေးရတယ်။
၀တ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်တွေက ကြောင်စာကြွေးကြ၊ အရက်သောက်ကြ၊ အလုပ်သွားကြ၊ ကိုယ်ကာယ နှီးနှောကြ (ဒီနေရာမှာလည်း မူရင်းက they fucked လား၊ they made love လားတွေမိတယ်။ တဆက်တည်း ချစ်မှုပြုတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာမှုပြုပုံကိုလည်း သွားသတိရမိတယ်) လုပ်နေကြတုံး ကျွန်တော်လည်း ချီးဆက်ပါနေတယ်။ အဲဒီ ကိုယ်လက်နှီးနှောကြတယ် ဆိုတဲ့အပိုဒ် အပီးမှပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်သာတက်ခြင်းကိစ္စကလည်း ပြီးသွားတယ်။
ညဦးပိုင်းက သောက်ခဲ့တဲ့ နွားနို့ရဲ့ တန်ခိုးကြောင့် အာနိသင်ကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ချီးကို တ၀ကြီးပါလိုက်ရတယ်။ ငုံကြည့်လိုက်တော့လည်း တော်တော်များတာတွေ့ရတယ်။
အိမ်သာကထွက်လာတော့ ကျွန်တော် ပျော်နေတယ်။ အကြောအချင်တွေလည်း ပျော့ပြီး နေရတာ အတော်သောင်သာနေတယ်။ ဆယ်တန်းတုံးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ကြားဖူးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုတောင် ရွတ်မိတယ်။ “If you want to shit at ease,..”။
ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တော့ မရွတ်ဖြစ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆို ကျွန်တော်က အဲဒီတစ်ကြောင်းပဲ မှတ်မိတာကိုး။
Saturday Afternoon’s Trash Bin
Posted in English on December 20, 2010| LeaveaComment »
Plastic bags (more than 10 bags)
One coffee-powder bag
Two coffee-mix bags
A used condom (not fluid in it)
A newspaper (two month old)
Want Want (from cake box)
‘’Anarchy begets anarchy, not democracy. Riots beget riots, not democracy” (from newspaper)
1. No smell so the collection looks updated
2. CSS (Cracked Sunflower Seeds) seem to be the last added items
သမီးကတော့ မခံနိုင်တော့ရင် အိမ်သာထဲမှာ သွားထိုင်နေလိုက်တယ်
Posted in Poem on December 17, 2010| LeaveaComment »
အဲဒီနေ့က လေတိုက်တယ်.. ဆောင်းလေပမာညီဆိုတဲ့ လေမျိုး
စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဖရဲသီးဖျော်ရည်ခွက်ကတော့ ပိုပြီး ပူနွေးလာလို့ပဲ
ပြတင်းပေါင်းကကြည့်လိုက်ရင် ကန်ရေပြင်ဟာ လက်ထနေတယ်
ချစ်သူတို့ဘာသာဘာဝအား မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်
ဒိုင်နိုဆောဟာ သူ့ကို တည်ဆောက်လိုက်ကတည်းက ဘယ်ကိုမှမသွားတော့ဘူးတဲ့
အဲဒီလို ကျောက်စာပါ ဖော်ပြချက်အရ ဟိုဆရာပြောသလိုဆို ငါတို့ယုံထိုက်တယ်ပေါ့
Posted in Poem on December 10, 2010| LeaveaComment »
လမ်းဘေးက မြက်ပင်လေးတွေ ယိုင်လဲနေတာ
တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ကိုင်ထားပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်နေတာ
အဆောက်အဦမှာ ထောင့်ချိုးလေး ထည့်ဆောက်ထားတာ
ညီမလေးကို လက်ဆွဲပြီး ကျောင်းသွားတာ
အမှောင်ထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင် ထွန်းထားတာ
Posted in Prose on December 8, 2010| 1 Comment »
ရာရာ..နင်နဲ့ငါ မမျှော်လင်ဘဲ facebook ပေါ်မှာ ပြန်ဆုံတော့ ငါ့စိတ်ထဲ တစ်မျိုးပဲ (၀မ်းသာတယ် + စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်)။ ရာရာ.. မတွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ် (= အချိန်)တွေမှာ နင်အရမ်းပြောင်းလဲသွားတယ်နော်။ နှစ် (+လူ)တွေက နင့်ကို တော်တော်ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်ပုံပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင့်ကို အခုလိုထက်သန်တက်ကြွပုံမျိုးနဲ့ ပြန်တွေ့လိုက်ရတော့ ငါကိုယ်ထဲ အပူတွေစီးရပြန်တာပေါ့။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ရွှေတောင်ကြား (နေရောင်မဖြာတဲ့ လမ်းကလေးအတွင်း) မှာ ကျောက်တွေသွားပြရင်း ဒါမျိုးတွေ မြွေရေခွံအိတ်နဲ့ နှစ်လုံးစာရှိတယ်လို့ နင်ပြောလိုက်တော့ အဘွားကြီးမျက်နှာ ဖြစ်သွားတာ ငါခုထိ မြင်ယောင်နေသေးတယ်။ အေးနောက်တော့ မိဘလက်ငုတ်ပဲ ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီး နယ်ကို နင်ပြန်(နင့်အခြေအနေကြီးနဲ့ ကကြီးကနေ အ,အထိ အလွယ်လေးဒိုးလို့ရသားနဲ့) သွားတာ။ အခုတော့ စီးပွားရေးကနေ နိုင်ငံရေးလိုင်းကို ကူး(/ပူး)သွား ပြန်ပြီလား ရာရာ(ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြတဲ့အထဲ နင်လည်းပါတာ တွေ့လိုက်တယ်)။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင့်ဒူးခေါင်းလေးတွေကို facebookပေါ်ကျမှ ငါတွေ့ဖူးတာပဲ။ အမှန်တကယ်ကတော့ နင့်ကိုငါ add လိုက်မလို့ပဲ။ နင့်အကြောင်းတွေ သိချင်စိတ်ကလည်း ရုန်းနေကန်နေလေတော့..။ ဒါပေမယ့် ငါသိချင်တာတွေ (Radio Head ကို နားထောင်ဖြစ်သေးလား၊ နင်ငါ့ဆီက ငှားသွားတဲ့ သိန်းသန်းထွန်းဝတ္ထုတွေရော၊ နင့်မိသားစု ဘယ်မှာလဲ၊ နင့်သားလေးနဲ့ နင်ပြန်တွေ့သေးလား..) ငါဘယ်လိုမေးရမလဲ။ တခါတလေ ဒိုရင်းမှာ ၀က်ကြောမှာမိရင်တော့ (+ပဒုံမာကွင်းဘေးက ထမင်းပေါင်းဆိုင်ရောက်ရင်တော့)နင့်ကို သတိရတယ် ။ နင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ငါသဘောအကျဆုံးကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ နင်နဲ့သိတဲ့လူ (တခါဘဲဆုံဖူးတာဖြစ်ချင်ဖြစ်)နဲ့ တွေ့ပြီဆို မခေါ်လည်း အတင်းဝင်ထိုင် စားသောက်ပီး အာရ်ကေ (နင်ခေါ်တဲ့အတိုင်း) မပေးဘဲ လစ်ထွက်သွားတတ်တာကိုပဲ ရာရာ။
Posted in Prose on December 6, 2010| 1 Comment »
Posted in Poem on December 2, 2010| LeaveaComment »
နှစ်ဆပိုမိုသော စုပ်ယူအားကောင်းမှုများ၊ မတွေ့ရတာကြာပြီနော်..ဘာလုပ်နေလဲများ၊ စတော်ကင်အောက်မှ သေးကြောင်းများ၊ အရေးကြီးပြီး နှစ်ဆပိုမိုသောသွေးစည်းကြစို့များ၊ စစ်ဘက် အသုံးစရိတ်များ၊ ယောက်ျားမှန်ရင် ဖင်ဝမှာ အမွေးရှိတယ်များ၊ ဂရင်းရွိုင်ရယ်သောက်သူများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောခင်ဗျားလည်းတစ်ခုခုတော့လုပ်သင့်တယ်များ၊ အထူးယာဉ်လိုင်းပေါ်မှ ထိုင်ခုံများ၊ အွန်လိုင်းကဗျာခပ်ကောင်းကောင်းများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်ရသူများ၊ နိုင်ငံရေးမပြောင်းရင် စီးပွားရေးတော့ ပြောင်းမှာပါများ၊ အယ်ကိုဟော ပါဝင်မှုနှုန်းများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၊ ခြေသည်းထောင့်မှ ကလော်ထုတ်ထားသောဂျီးများ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ၊ အိုင်အီးအယ်တီအက်စ် နှစ်ဆပိုမိုသောစာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးများ၊ မာစွပ်များ၊ အသားဟာ ကျည်ဆံထက် မမာနိုင်ဘူးများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောဆိုမာလီပင်လယ်ဓားပြအဖမ်းခံရသော မြန်မာသင်္ဘောသားများ၊ ငွေလဲနှုန်းများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောသုံးခွေတစ်ထောင်သုံးခွေတစ်ထောင်..အစ်ကိုဝင်ရွေးသွားလေများ၊ ကွန်နက်ရှင်ကျမှုများ၊ ဒီမှာ အရမ်းအနှိမ်ခံရတယ်များ၊ ရွန်းနီ၏ နှစ်ဆပိုမိုသောသွင်းဂိုးများ၊ သမီးလည်း ဒီမှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေပါပြီများ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း၏ ရိုက်ခတ်မှုများ၊ ရထားတဲ့ဘွဲ့နဲ့ နှစ်ဆပိုမိုသောလုပ်နေရတာ တခြားစီပါကွာများ၊ စလုံးနှင့် ယပလက်သို့ ရှော်ပင်ထွက်သူများ၊ ငါးနှစ်အောက်ကလေးသေနှုန်းများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောပီဖင်းဂိုးအသုံးပြုသူများ၊ ကြိုတင်မဲများ၊ ကျုပ်လား..ဂေါက်ရိုက်တယ်လေဗျာများ၊ မွေးနေ့ထောင့်မှာ ရေသပ္ပါယ်ခြင်းများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောဒါအမှန်ပဲလေများ၊ အရဟံတစ်လုံး မန်ယူတစ်လုံးများ၊ အမှုတ်ခံချင်ရင် ပိုက်ဆံထပ်ပေးရမယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းကဗျာခပ်ညံ့ညံ့များ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖော်ပြသူများ၊ လိုအပ်သည်များကို ညွှန်ကြားသွားမှုများ၊ အရွယ်မရောက်ခင် နှစ်ဆပိုမိုသောအပယ်ကြောက်သူများ၊ အိုင်အယ်လ်ဘီစီ ကျောင်းသားများ၊ ပေါ်လောမျောနေသော ဖော့ဘူးခွံများ၊ နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများအား နှစ်ဆပိုမိုသောဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်သောက်ပြီး အနိုင်ယူသူများ၊ အေအာတီဆေးသောက်ရန် လိုအပ်နေသူများ၊ ပရောက်ဆီသုံးစရာမလိုဘဲ နှစ်ဆပိုမိုသောကြည့်နိုင်သော ပွန်းဆိုက်များ၊ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသော ပညာရေး ဟောပြောပွဲများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောကလေးအငှားနဲ့တောင်းစားသူများ၊ မှည့်ဆေးထိုးထားတဲ့ သစ်သီးများ၊ အပ်ကနေ … အထိ ရနိုင်တဲ့ စူပါမားကက်များ၊ ရှဲပေးထားသော နှစ်ဆပိုမိုသောလင့်ခ်များ၊ ဓာတ်ဆီတန်းစီသည့် ကားများ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှ မော်တော်ပီကယ်ထံ လွှင့်ပစ်ပေးရသော ဘော်ဒါကြေးများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောအလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ ကျောင်းတက်သူများ၊ ဂျာနယ်ထဲကပုံတွေကြည့်ပြီး လက်ကစားသူများ၊ စီဒီအမ်အေ၄၅၀ဖုန်းများ၊ ဘီးကြဲကို နှစ်ဆပိုမိုသောတကယ်မချစ်တာသိရဲ့သားနဲ့များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီများ၊ အမေရိကန် ကျူးကျော်မှုကြောင့် အီရတ်နှင့် နှစ်ဆပိုမိုသောအာဖဂန်ပြည်သူသေဆုံးမှုများ၊ တက်ကလုတ်စီးသူများ၊ သွေးသံရဲရဲကိုမှ မြင်ချင်ကြည့်ချင်စိတ်များ၊ အသားအရေနှင့် နှစ်ဆပိုမိုသောနှုတ်ခမ်းနီအရောင် မလိုက်ဘက်မှုများ၊ ရေသုံးရမယ့်နေရာမှာ တစ်ရှုးအသုံးပြုခဲ့ခြင်းများ၊ ဘုန်တော်ကြီးသင် ပညာရေး နှစ်ဆပိုမိုသောလေ့လာဆည်းပူးသူများ၊ တစ်ယောက်တည်းတွန်းရင်မရွေ့ အများတွန်းရင် ရွေ့မယ်ထင်သူများ၊ စတုဒီသာ တန်းစီသူများ၊ နှစ်ဆပိုမိုသောငွေပေါ်လျှော့ဈေးများ၊ ကျော်သူ့အကူအညီများ။